CINABTA CALEEMAHA: SHARAXAADA KALA DUWAN IYO SAWIRRADA, GAAR AHAAN BEERASHADA, CUDURADA IYO CAYAYAANKA - BEERTA
Ugu Weyn Ee Beerta
Diiwaangelinta wax soosaarista - canab "Pervozvanny"
Qolalka cuntada noocyo canab Sannado badan, waxay caan ku yihiin iibsadaha.
Si kastaba ha noqotee, canab, sida aad ogtahay, waa wax aan fiicneyn, mana kori karo xaaladaha cimilada aan la aqbali karin.
Tani waxay xooga saartaa kuwa hareeraha ku hareeraysan aduunka oo dhan, waaweyn iyo kuwo yaryar, si ay ugu galaan xulashada kala duwan ee noocyo cusub, si ay canabku u dhalin karto meeshii horay u jirtay dhibaatooyin.
Waxyaabo badan oo xiiso leh oo ku saabsan canabta caleenta ah, iyo sidoo kale sharaxaad ka duwan ee kala duwan iyo sawirkii berry, ayaa lagu bixiyey maqaalkan hoose. Natiijada ka mid ah shaqada this taranta ee dhaqdhaqaaqa hiwaayadda Ruush wuxuu ahaa kala duwan Pervozvanny.
Isbedelka ugu horeeya ee loo yaqaan - Tani waa noocyo kala duwan oo canab ah oo miro ah oo ka mid ah taranka hiwaayadda, oo laga sameeyey Ruush. Atam, Alpha iyo Bogatyanovsky waxay ka tirsan yihiin noocyada miisaska cad.
Taariikhda la qabsiga
Kala duwanaanta canabka "Faleenka" waxaa laga bilaabay Ruushka, magaalada Novocherkassk, gobolka Rostov. Xulashada noocyada this hybrid qabteen Krainov V.N.
Sida badan oo ka mid ah noocyo kale oo kale, "First-Called" waxaa la soo saaray VN Krainov. markaad ka gudubto canabka Talisman iyo Shirkadda Kishmish. Marka laga soo tago Novocherkassk, waxaa sidoo kale lagu tijaabiyaa koonfurta dalka Belarus.
Gacanta qashinka ah ee Blagovest, Victor iyo Angelica.
Kalluunka kala duwanaanshahan ayaa iska leh awoodda, xoog leh noocyada canab. Nooca ubaxa waa oboepoly. Montepulciano, Julian iyo Tason ayaa sidoo kale leh hermaphroditic ubaxa.
Noocyo nooca berry ah Cagaarshow-cadaan. Qorraxda, berry waxay heli doonaan hooska casaanka ah ee tan. Baaxadda, weyn ama aad u ballaaran, qiyaastii 27 ilaa 24 mm. Miisaanka hal berri ayaa gaari kara 10g.
Foomka canab, daboolay ubax badan dhir - pruino. Maqaarka, sida uu sheego by breeder, waa dhuuban oo la cuno, jidhku waa fareem iyo casiir leh.
Inkasta oo beeralayda qaar ay soo sheegaan in mararka qaarkood loo yaqaan "First Called" aysan gaarin guryaha la sheegay. The berry ma koraan ilaa 10 g, maqaarka waa qaro weyn, in gardarrada ma qaadan doono.
Qaybaha kala duwan ee noocyada kala duwan ayaa sidoo kale waa weyn: 500-700 g waliba waxay helayaan qaab cylindrical ama cylindrical-conical qaab ah. Buraashka cufnaanta dhexdhexaadka ah. Beerto ayaan lahayn. Vine, sida ay soo sheegeen by quraacda, waxay ku bislaadaan si aad u fiican, ku dhowaad dhammaan dhererka biqil. Well si gooyn xidid.
Wuxuu baxaa marka ugu horeysa ee loo yaqaan 'First Called' celcelis ahaan. Asal ahaan waa isku mid wadnaha. Laga soo bilaabo bartamaha waxay tagtaa shan dabe. Heerka qashinka caleenta way ka duwan tahay. Qaybta kore ee caleemaha ayaa si sahlan loo duubay, qaybta hoose ayaa badanaaba dhasha.
Iskudhin kala duwan waxaa loola jeedaa noocyada hore ee koriinkedu. Celcelis ahaan Bisaylku wuxuu ka bilaabmaa 105 ilaa 115 maalmood. Dhulgooyooyinka Novocherkassk, wuxuu siinayaa goosashada dabayaaqadii July - horraantii Agoosto. Lafaha Pavutsky, Lia iyo Krasny Delight ayaa sidoo kale lagu kala duwan yahay dhaqanka hore.
Waxsoosaar waxay siisaa sareeya. Dhadhanka berry waa mid isku mid ah. Waxyaabaha sonkorta ee nooca berry ah ee ku yaal aagga 18-21%, acidity heerka 6-8 g / l. Boqolkiiba caleemaha caan ah ee kala duwan ee noocaan ah waa ilaa 60%, oo leh qiyaasta 1.0-1.3. Cabbirka baadiyaha waxay ku saabsan tahay 35-45 indhood.
Ka dib burburkii, tirada caleemaha cagaaran waa inaysan ka badneyn 30-35. Waxyaabaha ugu fiican waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin culeys 25-20. Gawaarida miro ayaa laga jaraa 6-10 indhood. Farsamadu waxay u adkeysan kartaa heerkulka qabowga ilaa 23 darajo.
Guud ahaan, Pervozvanny waxaa loo tixgeliyaa noocyo badan oo u adkeysi leh, taas oo ah mid aan macquul aheyn cudurro.
Nabadgelyada noocyada kala duwan ee la xidhiidha xagta oo caarad leh iyo kalluun quraarad ah ayaa lagu qiyaasay 3.5-4 dhibcood. Heerka dhibaatada oidiyoon waxaa lagu qiyaasay 3.5-4 dhibcood.
Iskudhin kala duwan, sida kor ku xusan, waxay leedahay iska caabin wanaagsan oo ah xagta, caarada iyo kalluunka casaanka. Laakiin tani ma dhicin xaqiiqda ah in cawska ma aha inay ilaaliso canab. Dhibaatooyinka noocan ah sida anthracnose, bakteeriyosis, chlorosis, rubella ama kansarka bakteeriyada ayaa badanaa noqda marti beereyaal ah.
Xakamaynta Cudurrada Caanaha - Tani waa shaqo adag oo joogto ah. Oo waxay u dhacdaa sababtoo ah, in ka badan oo dhan, daaweynta dhirta leh diyaar garow gaar ah.
Qoondaynta diyaarinta nafleyda iyo kiimikada.. Noocyada bayoolojiyada sida Trichodermine, Gaupsin, Actophyte waa kuwo wax ku ool ah, laakiin adeegsigoodu waa qaali. Kiimikooyinka ayaa shaqeynaya waqti dheer, laakiin waxay kaloo keenaan waxyeello dheeraad ah.
Kiimikooyinka ma ahan inay ka sarreyso heerka halista 2aad.
Inta badan, dagaalka ka dhanka ah cayayaanka iyo cudurada waxay bilaabmaysaa wajiga ubax ee canabkiinna. Kadibna ciribtirka daaweyn leh 3% xal sulfate ah ayaa lagu sameeyaa. Si loo xakameeyo cudurada fangaska (xagta, oidiyum, caaryaal cawl), fungicides ee nidaam ama nidaam xiriir.
Nidaamka ayaa loo saari karaa Topaz, Kvadris, By-leton - waxaa loo isticmaalaa ka hortagga.
Isticmaal xiriirka marka cudurku dhaco. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad ka saarto aagga ay dhibaatadu saameysey, ka dibna daawee daawada baadiyaha.
Si arrintan loo sameeyo, qalab ku habboon sida Rubost, Blue-Bordeaux (Bordeaux fluid).
Si loola dagaallamo, caarada, caleemaha, dawooyinka Aktara, Decis-Profi, BI-58 waa ku habboon yihiin. Waa muhiim in la fahmo in isticmaalka daroogooyinkaasi ay suurtogal tahay ka hor inta aan ubaxin iyo sida qiyaasta ka hortag ah. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu dabaqo macnaheedu waxa weeye marka loo eego cimilada, iftiinka cimilada, iyada oo aanad illoobin hababka ilaalinta.
Marka lagu daro cudurrada dhaqameed ee saameynaya canabku, beeruhu wuxuu leeyahay laba cadow: xajmiga iyo shimbiraha. Cayayaanka ka mid ah cayayaanka ayaa lagu kala saari karaa boodhadh. Waxay aad u jecel yihiin sonkorta, iyo halka, haddii, haddii aan beerta canabka ah, waxaa laga heli karaa.
Mawjaduhu maaha mid khatar u ah cayayaanka kale - ma ayan beeraan duurka, laakiin waxay u keenaan waxyeelo culus ee berry ah. Inta badan, waxay cunaan qashinka waxayna isku dayaan in ay cabaan casiir ka soo berry. Mararka qaar, iyagoo midba midka kale ka jabay, waxay si tartiib ah u garaacaan kuwa kale si ay halsano uga bilaabato iyaga. Dhowr maalmood ka dib waxay ku soo noqdaan "jirka".
Hababka kala shaqeynta iyaga ayaa laga yaabaa inay kala duwanaan karaan. Inta badan winegrowers lasiiyo burburinta jireed ee xajka. Mid ka mid ah siyaabaha ugu waxtar leh waa in la burburiyo rugta. Haddii aan la helin, ka dibna qoyaan ayaa la dhigayaa meel u dhow canabkiinna.
Ka hor inta canab caleenta, cirbaddu waa cuntooyinka borootinka naaxinta. Sidaa daraadeed, beeralayda qibrada leh waxaa lagula talinayaa in ay laalaabiyaan xayawaanka kalluunka ama hilibka ee hore loogu qooyay Imidacloprid. Marka canabku bilawdo inuu ubaxu dhaco, cirbadaha ayaa laga jeedin karaa iyada oo la adeegsanayo dabin leh xal macaan. Waxaad ku dari kartaa malab ama sonkor, iyo sidoo kale daroogooyinka Aktara ama Regent.
Daroogooyinka waxaa lagu bedeli karaa xal boric acid ah. Halkan waa in aan xusuusanno in fiilooyinka aan hoos ku dhicin biyaha. Sidaa daraadeed, waxa fiican in lagu daro saabuunta dareeraha ah ee xalka. Waxaa jira siyaabo badan oo aadane ah. Kala soocista kabiinka waxaa lagu duubi karaa tulle ama bacaha agrofiber.
Shaashadda ilaalinta ayaa ka ilaalisa midhaha berbera. Xaaladdan oo kale, bacaha faashadda waa ka wanaagsan tahay in aan dhoobo, sababtoo ah, qoyan qoyan, waxay u dhajisaa berry. Bacaha ugu haboon ee kabadhada. Laga soo bilaabo shimbiraha sida ilaalinta waxay u adeegi karaan sida shabeel oo ay ku jiraan duurka ama dhagax, kaas oo cabsiin doona kuwa duuban ee shimbirta leh cod.
Kala duwanaanta canabkeed ee dhirta ayaa si fiican u kori kara meelo koonfureed ee dalka Ruushka. Waxay si dhakhso ah u Bloom, siinayaa miro culus. Waxay leedahay iska caabin ah "cudurro" canab, laakiin, sida canab kale, waxay u baahan tahay daryeel taxadar leh.
Sidee loo kaydiyaa bocorka oo dhan oo la jarjarayey guriga: balakoonka ama qaboojiyaha?
Large-fruited kala duwan ee yaryar ee yaanyada Qarsoodi ah aan muuqan
Sidee iyo waxa la quudiyo begonia? Xeerarka guud ee codsiga bacrimin
Cudurada ugu waaweyn ee azaleas iyo daaweyntooda
Noocyada kaydka ee bilowga ah, halka laga bilaabayo
Canab laga bilaabo dhagaxa
Noocyada kala duwan ee jeeriga ee gobolka Moscow
Noocyo kala duwan oo ah basbaas
Qajaarka koraya ee foosto
Cherry macaan oo huruud ah
Qof kastaa waa yaqaan ivy, maaddaama dhirtaas lagu arki karo daaqado lagu qurxiyo beeraha, ama duurjoogta dhinaca dhinaca wadada ah, hooska qayb ahaan. Maanta waxaan baran doonaa wax badan oo ku saabsan waxa iiruhu yahay, sida laysugu dhufto, iyo haddii ay u baahan tahay xaalado gaar ah. Kuwa go'aaminaya ivy waa inay u diyaargaroobaan dhibaatooyinka qaarkood. Read More
Tamaandho: Calaamado, sharax, dhalid
Sidee loo daweeyaa askosferosis ee bees
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beerta 2020